Imithetho Yokuhlukumeza Ngokocansi e-Dubai Nase-UAE | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Okufanele ukwazi mayelana nokuhlukunyezwa ngokocansi: Imithetho yase-Dubai ne-UAE
Lesi sihloko sixoxa ngakho konke okudingeka ukwazi mayelana nokuhlukunyezwa ngokocansi e-Dubai nase-UAE kanye nemithetho ephathelene nakho.
Kuyini ukuxhashazwa ngokobulili?
Ukuhlukumeza ngokocansi kuchazwa njenganoma yikuphi ukunaka okungafunwa nokungaceliwe okucindezelwa kumuntu mayelana nobulili bakhe. Kufaka phakathi izenzo zocansi ezingamukelekile, izicelo zokwenzelwa ucansi, nezinye izenzo zamazwi noma ezithinta umzimba eziholela ekutheni isisulu azizwe engakhululekile futhi ehlukunyeziwe.
Izinhlobo Noma Izinhlobo Zokuhlukumeza Ngokocansi
Ukuhlukumeza ngokocansi kuyigama eliyisambulela elihlanganisa zonke izinhlobo zokunaka okungamukelekile mayelana nobulili bomuntu. Ihlanganisa izici ezingokoqobo, zomlomo nezingezona ezezwi zokunaka okungamukeleki okunjalo futhi ingathatha noma yimaphi amafomu alandelayo:
Umhlukumezi wenza ukuthanda ucansi kube umbandela wokuqasha, ukukhangisa, noma ukuklomelisa umuntu, ngokusobala noma ngokungagunci.
Ukushaya isisulu ngokocansi.
Ukucela umusa wocansi kulowo ohlukunyeziwe.
Ukwenza izitatimende ezihlukumeza ngokocansi, okuhlanganisa namahlaya ahlekisayo mayelana nezenzo zocansi noma umumo womuntu wocansi.
Ukuqala noma ukugcina ukuthintana ngokomzimba nesisulu ngokungafanele.
Ukwenza izenzo zocansi ezingamukelekile kulowo ohlukunyeziwe.
Ukuba nezingxoxo ezingafanele ngobudlelwano bocansi, izindaba, noma amaphupho ezindaweni ezingafanele njengasemsebenzini, esikoleni, nezinye.
Ukufaka ingcindezi kumuntu ukuthi azibandakanye naye ngokocansi
Izenzo zokuchayeka ngendlela engafanele, kungaba ngezomhlukumezi noma ohlukunyeziwe
Ukuthumela izithombe zocansi ezingafunwa nezingaceliwe, ama-imeyili noma imiyalezo yombhalo kohlukunyeziwe.
Uyini umehluko phakathi kokuhlukunyezwa ngokocansi nokunukubezwa ngokocansi?
Kukhona umehluko obalulekile phakathi kokuhlukunyezwa ngokocansi nokuhlukumeza ngokocansi.
Ukuhlukumeza ngokocansi yigama elibanzi elihlanganisa zonke izinhlobo zokunaka okungamukelekile mayelana ne-ajenda. Ngokuphambene, ukuhlukunyezwa ngokocansi kuchaza noma yikuphi ukuthintana ngokomzimba, ngokocansi noma ukuziphatha umuntu akutholayo ngaphandle kwemvume.
Ukuhlukunyezwa ngokocansi ngokuvamile kwephula imithetho yomphakathi yase-UAE (umuntu unelungelo lokwenza ibhizinisi lakhe ngaphandle kokwesaba ukuhlukunyezwa okuvela kunoma iyiphi ingxenye). Ngokuphambene, ukuhlukumeza ngokocansi kwephula izimiso zobugebengu futhi kuthathwa njengesenzo sobugebengu.
Ukuhlukumeza ngokocansi kwenzeka ngalezi zindlela ezilandelayo:
Ukungena ngaphandle kwemvume emzimbeni wesisulu, okubuye kwaziwe ngokuthi ukudlwengulwa.
Ukuzama ukungena ngaphandle kokuvumelana nomuntu ohlukunyeziwe.
Ukuphoqa umuntu ukuthi enze izenzo zocansi, isb, ucansi lomlomo nezinye izenzo zocansi.
Ukuthintana ocansini okungafunwa kwanoma yiluphi uhlobo, isb, ukubhebhana
Yini okufanele ngiyenze lapho ngibona ukuhlukunyezwa ngokocansi?
Njengofakazi wesiqephu sokuhlukunyezwa ngokocansi, ungenza lokhu okulandelayo:
Khuluma nomuntu okuhlukumezayo: uma uqinisekile ukuthi ukumelana nomuntu okuhlukumezayo ngeke kukubeke engozini futhi kungase kunqande isenzo esingcolile, ngicela wenze njalo. Kodwa-ke, kufanele uqiniseke ngokuphelele ukuthi ukuthatha umhlukumezi ngeke kusishubise isimo noma kubeke wena kanye nomuntu ohlukunyezwayo esimweni esingamukeleki.
Banga isiphazamiso: uma unomuzwa wokuthi indlela eqondile ingase ingafaneleki isimo, ungase umise isigameko ngokubangela ukuphazamiseka futhi ugxilise ukunaka kuwena esikhundleni sokuba umuntu akhathazeke futhi ahlukunyezwe. Ungakwenza lokhu ngokubuza umbuzo, ukuqala ingxoxo engahlobene, noma ukuthola isizathu sokususa umuntu olinyazwayo noma ohlukunyezwayo endaweni.
Thola omunye umuntu ukuthi angenelele: ungazisa umphathi, omunye osebenza naye, noma umuntu omsebenzi wakhe kuwukusingatha izimo ezinjalo.
Nikeza ihlombe ongancika kulo: uma ungeke ukwazi ukungenelela ngenkathi ukuhlukunyezwa kuqhubeka, usengakwazi ukusekela isisulu ngokuvuma ukulinyazwa kwaso, ukuzwelana naso, nokunikeza ukusekelwa esikudingayo.
Gcina irekhodi lesigameko: lokhu kukusiza ukuthi ukhumbule ngokunembile ukuhlukunyezwa futhi unikeze ubufakazi uma isisulu sinquma ukufaka isikhalazo kuziphathimandla ezifanele.
Imithetho ye-UAE Yokuhlukumeza Ngokocansi
Imithetho ye-UAE mayelana nokuhlukumeza ngokocansi ingatholakala ekhodini Yengwebo: Inombolo Yomthetho Wesifunda 3 ka-1987. Izihloko 358 kanye no-359 zalo mthetho zichaza incazelo yomthetho ukuhlukunyezwa ngokocansi kanye nezijeziso ezifanele.
Ezikhathini ezedlule, i-UAE kanye Dubai babebheke “ukuhlukunyezwa ngokobulili” njengecala elibhekiswe kwabesifazane futhi benza imithetho yabhalwa ngaleyo ndlela. Nokho, leli gama lisanda kunwetshwa ukuze lifake amadoda njengezisulu, futhi izinguquko zakamuva emthethweni bonisa lesi sikhundla esisha (Nombolo yoMthetho 15 ka-2020). Ngakho izisulu zabesilisa nabesifazane zokuhlukunyezwa ngokobulili manje seziphathwa ngokulinganayo.
Lesi sichibiyelo sandise incazelo esemthethweni yokuhlukumeza ngokocansi ukuthi ifake phakathi izenzo ezihlukumezayo, amagama noma izimpawu. Kuhlanganisa nezenzo ezihloselwe ukunxenxa umemukeli ukuba asabele ezifisweni zobulili zomhlukumezi noma zomunye umuntu. Ukwengeza, lesi sichibiyelo sethule izinhlawulo eziqinile zokuhlukunyezwa ngokocansi.
Isijeziso kanye Nesijeziso Ngokuhlukumeza Ngokocansi
Ama-athikili 358 kanye no-359 e-Federal Law Number 3 ka-1987 yekhodi yenhlawulo ye-UAE ichaza izijeziso nezijeziso zokuhlukunyezwa ngokocansi.
Isigaba 358 sisho okulandelayo:
Uma umuntu enza obala noma ngokusobala isenzo esiyichilo noma esihlazisayo, uzohlala esitokisini okungenani izinyanga eziyisithupha.
Uma umuntu enze isenzo esingamukeleki noma esiyichilo entombazaneni engaphansi kweminyaka engu-15 ubudala, esidlangalaleni noma ngasese, uyoboshwa okungenani unyaka owodwa.
Isigaba 359 sisho okulandelayo:
Uma umuntu ehlaza umuntu wesifazane esidlangalaleni ngamazwi noma ngezenzo, uzoboshwa isikhathi esingeqile eminyakeni emibili futhi akhokhe inhlawulo efinyelela ku-10,000 dirham.
Uma owesilisa ezifihla ingubo yowesifazane futhi engena endaweni yomphakathi egcinelwe abesifazane, bayoboshwa iminyaka engaphezu kwemibili futhi bakhokhe inhlawulo ye-10,000 dirham. Ngaphezu kwalokho, uma owesilisa enze ubugebengu egqoke njengowesifazane, lokhu kuzobhekwa njengesimo esibi.
Kodwa-ke, imithetho echitshiyelwe manje isho lezi zijeziso ezilandelayo zokuhlukunyezwa ngokocansi:
Noma ubani onukubeza owesifazane esidlangalaleni ngamazwi noma ngezenzo unesibopho sokudonsa iminyaka emibili ejele kanye nenhlawulo engu-100,000 dirham, noma okunye. Lokhu kulungiselelwa kuphinde kufake i-catcalling kanye ne-wolf-whistling.
Noma ubani okhuthaza noma obhebhethekisa izenzo zokuziphatha okuxekethile noma okuxekethile uthathwa njengobugebengu, futhi inhlawulo ingaba yizinyanga eziyisithupha ejele kanye nenhlawulo eyi-100,000 dirham, noma okunye.
Noma ubani odlulisela icala, oculayo, oklabalasayo, noma okhuluma izinkulumo ezingcolile noma ezinenhlamba naye ubhekwa njengowenzile ubugebengu. Isijeziso isikhathi esiningi ejele yinyanga eyodwa kanye nenhlawulo engu-100,000 dirham, noma okunye.
Ayini amalungelo ami?
Njengesakhamuzi sase-Dubai nase-UAE, unamalungelo alandelayo:
Ilungelo lokusebenza nokuhlala endaweni ephephile nengenakho ukuhlukunyezwa ngokocansi
Ilungelo lolwazi lwemithetho nezinqubomgomo mayelana nokuhlukumeza ngokocansi
Ilungelo lokukhuluma nokukhuluma ngokumelene nokuhlukunyezwa ngokocansi
Ilungelo lokubika ukuhlukunyezwa kwabasemagunyeni abafanele
Ilungelo lokufakaza njengofakazi noma ukubamba iqhaza ophenyweni
Inqubo yokufaka isikhalazo
Uma wena noma othandekayo wakho nibe yisisulu sokuhlukunyezwa ngokocansi, landela izinqubo ezingezansi ukuze ufake isikhalazo:
Xhumana nokuhlukunyezwa ngokocansi ummeli e Dubai
Ukanye nommeli wakho, hamba uye esiteshini samaphoyisa esiseduze uyokhononda ngokuhlukunyezwa. Uma ungazizwa ukhululekile ukungena ku-a esiteshini samaphoyisa ukubika ukuhlukunyezwa, ungashayela amaphoyisa aseDubai inombolo yocingo yamahora angama-24 ngokubika amacala okunukubezwa ngokocansi ku-042661228.
Qiniseka ukuthi unikeza ukubika okunembile kwesigameko kanye nemininingwane yomhlukumezi.
Hamba nabo bonke ubufakazi ongabuthola ukusekela isikhalazo sakho
Uma usubhalisile isikhalo, ihhovisi lomshushisi womphakathi lizoqala uphenyo ngalolu daba.
Umshushisi womphakathi uzobhala umbiko wobugebengu mayelana nalolu daba bese edlulisela ifayela enkantolo yobugebengu ukuze ikhiphe isinqumo.
Amacala Okuhlukumeza Ngokocansi Singawaphatha Ezinkampanini Zethu Zomthetho
Kuwethu imithetho yamafemu, singaphatha zonke izinhlobo zamacala okuhlukumeza ngokocansi, okuhlanganisa:
Indawo yokusebenza enobutha
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami
Isicelo esingamukelekile socansi
Ukucwasa ngobulili emsebenzini
Ukuphana izipho zocansi emsebenzini
Ukuhlukunyezwa ngokocansi ngumphathi
Ukuphoqwa ngokocansi emsebenzini
Ukuhlukunyezwa ngokocansi okungebona abasebenzi
Ukuhlukunyezwa ngokocansi kwabesilisa abathandana nabobulili obufanayo
Ukuhlukunyezwa ngokocansi emicimbini engaphandle kwesayithi
Ukuziphatha kocansi okuwubugebengu
Ukuhlukunyezwa ngokocansi osebenza naye
Ukuhlukunyezwa okuphathelene nocansi
Ukuthintana ngokomzimba okungafunwa
Ukuhlukunyezwa ngokobulili obufanayo
Ukuhlukunyezwa ngokocansi emaphathini eholidi lasehhovisi
Ukuhlukunyezwa ngokocansi yi-CEO
Ukuhlukunyezwa ngokocansi umphathi
Ukuhlukunyezwa ngokocansi ngumnikazi
Ukuhlukunyezwa ngokocansi ku-inthanethi
Ukuhlukunyezwa ngokocansi kwemboni yezemfashini
Izithombe zobulili ezingcolile nezithombe ezicasulayo emsebenzini
Ummeli Wokuhlukumeza Ngokocansi Angakusiza Kanjani Icala Lakho?
Ummeli wokuhlukumeza ngokocansi usiza icala lakho ngokuqinisekisa ukuthi izinto zihamba kahle ngokushelela ngangokunokwenzeka. Baqinisekisa ukuthi awugqitshwa yimininingwane yokufaka isikhalo nokufuna izinyathelo ngeqembu elikuhlukumezayo. Ukwengeza, bayasiza ekuqinisekiseni ukuthi ufaka isimangalo sakho ngaphakathi komkhawulo wesikhathi oshiwo umthetho ukuze uthole ubulungisa ngokulimala kwakho.